एलियन्सबारे वैज्ञानिकहरूको यस्तो प्रमाण - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सेक्सको समयमा यस कारण हुन्छ योनी सुख्खा
‘सुपर म्यान’ हाम्रो पापा
७४५ पालिकाको मतगणना सम्पन्न
दश महिनामा एक खर्बभन्दा बढीको तेल नेपाल भित्रियो
महिलालाई मारेको अभियोगमा भेडालाई तीन वर्ष जेल
रौतहटको १६ पालिकामा मतगणना सम्पन्न
एलियन्सबारे वैज्ञानिकहरूको यस्तो प्रमाण
मेरो लाइफस्टाइल || 27 April, 2022
एलियनको अस्तित्वको बारेमा धेरै दाबीहरू गरिन्छ । एलियनहरूबारे वैज्ञानिकहरूको राय पनि समान छैन । एलियन र युएफओबारे विभिन्न दाबीहरू गरिन्छ । यो पृथ्वीमा हरेक दिन एलियन र यूएफओ देख्ने दाबी गरिएको छ । कहिलेकाहीँ यस्ता दाबी गरिन्छ जसको बारेमा थाहा पाउँदा अचम्म लाग्छ । के पृथ्वीबाहेक ब्रह्मान्डमा पनि जीवन छ ? के एलियनहरू अन्तरिक्षमा अवस्थित छन ? यसको ठोस प्रमाण कसैसँग छैन । एलियनको अस्तित्वबारे वैज्ञानिकहरूले वर्षौंदेखि अनुसन्धान गरिरहेका छन्, तर अहिलेसम्म कुनै सफलता भने पाउन सकेको छैन । तर, एलियन्सको बारेमा हरेक दिन नयाँ दाबी गरिन्छ ।
अहिले वैज्ञानिकहरू अन्तरिक्षमा जीवनको सम्भावना रहेको ठाउँ खोजिरहेका छन् । बृहस्पतिको चन्द्रमा युरोपमा एलियन्स हुनसक्ने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ ।
बृहस्पतिको चन्द्रमा युरोपाको अधिकांश सतह बरफले ढाकिएको छ । भर्खरै, वैज्ञानिकहरूले थाहा पाएका छन् कि युरोपमा पानी हुन सक्छ । युरोपको भौगोलिक स्थिति ग्रिनल्यान्डसँग मेल खान्छ, जसका कारण यहाँ जीवनको सम्भावना व्यक्त गरिएको छ ।
वैज्ञानिकहरूले युरोपामा बरफको ठोस सतहमुनि पानी रहेको ठाउँमा जीवन पाउन सक्ने सम्भावनालाई आधार बनाएका छन् । वैज्ञानिकहरूले युरोपमा सयौं किलोमिटरमा चराहरू पनि फेला पारेका छन ।
यी चट्टानहरू माथि उठेको बरफ हो जसलाई डबल रिज भनिन्छ । यी चट्टानहरूमा र उत्तर–पश्चिम ग्रिनल्यान्डमा समानान्तरहरू छन । वैज्ञानिकहरूले युरोपामा पहिलो पटक पृथ्वीमा हुने यस्तै कुरा फेला पारेका छन ।
युरोपमा पाइने दोहोरो रिजको उचाइ करिब एक हजार फिट रहेको र लम्बाइ आधा माइलभन्दा बढी रहेको वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाएका छन् ।
स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीका प्रोफेसर डस्टिन श्रोडर भन्छन् कि, यदि बरफ मुनि पानी छ भने जीवन हुन सक्छ । उनी भन्छन् कि ग्रिनल्याण्ड जस्तै केही युरोपको पनि भौगोलिक अवस्थिति छ । यहाँ पानी हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रोफेसर डस्टिन श्रोडरले मौसम परिवर्तनसँग सम्बन्धित खोजका क्रममा संयोगवश यो पाएको बताए ।
मानिसको जस्तै ओठ भएको एलियन जीव
एलियन्ससँग यौन सम्बन्ध राखेको अचम्मको दाबी
एक वर्षमा २५९ पटक एलियन्स देखिएको वैज्ञानिकहरूको दाबी - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] लाग्छ । संसारभरका धेरै मानिसहरूले एलियन र यूएफओहरू देखेको दाबी गरेका छन् । के […]
अन्तरिक्षमा मानिसको नग्न तस्विर पठाउने - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] यति बेला एलियन्सको चर्चा भइरहेको छ । एलियन्स बारे हरेक दिन नयाँ र चकित पार्ने दाबी […]
जति यौन चाहना बढी भयो उति नै बढी योनीबाट तरल पदार्थ प्रवाह हुन्छ । तर, यौन इच्छा भएन भने महिलाको
काठमाडौंमा एउटा निश्चित समुदायले मधेसी सुमदायका ब्यक्तिलाई ‘मनु मखु मर्स्या ख:’ (मान्छे होइन, मधेसी हो) भन्छन् भन्ने जुन भाष्य सिर्जना
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो दश महिनामा नेपालले विभिन्न देशबाट १ खर्ब १ अर्ब ५३ करोड ७९ लाख ३४
एउटा अनौठो घटनामा दक्षिण सुडानमा एउटा भेडालाई एक महिलाको हत्या गरेको अभियोगमा तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । सुडानको